မတ်လ 2019 |5၏စာမျက်နှာ 81 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2019 » မတ်လ (စာမျက်နှာ 5)
field ထုတ်လုပ်သူကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်ဟူစတန်, တက္ကဆပ် Duration: အစောပိုင်းဧပြီလလစာ / နှုန်း $ 500 / နေ့ကယောဘ 03 / 26 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်ဟူစတန်, တက္ကဆပ်အတွက်အတွေ့အကြုံရှိလယ်ကွင်းထုတ်လုပ်သူရှာဖွေနေယောဘအကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးဘူး။ အစောပိုင်းဧပြီလရက်စွဲများ။ rate $ 500 / နေ့။ ယခုပင်လျှင်အသေးစိတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဘို့အ Now ကို Upgrade? >> ပိုခုနှစ်တွင် Sign ကျေးဇူးပြု.
Webseries Editor ကို
Webseries Editor ကိုကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်စီးတီး, ပြည်နယ် Los Angeles မြို့,, CA Duration: လစာ / နှုန်း Negotiable အယောဘကိုထောက်ပံ့ပေးမပေး 03 / 26 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်ငါခိုင်ခံ့ဇာတ်ကြောင်းအတွေ့အကြုံနှင့်တည်းဖြတ်ရန်ဟာသအတွက်ပိုကောင်းအတွေ့အကြုံနှင့်အတူတစ်အယ်ဒီတာကိုရှာနေပါတယ်ယောဘအကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား တစ်ဦး 30 8-3 မိ၏4ဖြစ်စဉ်များအသီးအသီးသို့ပြိုပျက် SAG မီဒီယာအသစ် webseries min ။ ...
အသံဒီဇိုင်နာကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်စီးတီး, ပြည်နယ် Los Angeles မြို့, 03 / 26 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်, CA Duration: မပေးထားလစာ / နှုန်းထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘသည်လက်ရှိတွင်တက်ပြီးသွားတဲ့အနိမ့်ဘတ်ဂျက်သိသိသာသာ feature ကိုရုပ်ရှင်များအတွက်အသံဒီဇိုင်နာရှာဖွေနေယောဘအကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား တည်းဖြတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်။ ဤပုဂ္ဂိုလ်ကိုလာမယ့်အတွင်းစီမံကိန်းပေါ်သို့ခုန်ဖို့အဆင်သင့်နှင့်အမရရှိနိုင်ပါဖြစ်သင့်သည် ...
, CA Duration: လစာ / နှုန်းယောဘသည် 03 / 26 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်ငါ Snapchat စီးရီးတစ်ခု DP ရှာနေတာယောဘအကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထားပေးမပေးမဓါတ်ပုံကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်စီးတီး၏ဒါရိုက်တာ, ပြည်နယ် Los Angeles မြို့။ (မဟုတ်သောပြည်ထောင်စု) ငါသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကင်မရာရှိပြီးမျှော်လင့် steadicam နှင့် / သို့မဟုတ်ပခုံးတူးစင်သူတစ်ဦးလိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါ DP လည်းအဆင်ပြေဖြစ်သင့် ...
တွင်-ဆိုက်ကို PT Editor ကို
FT ယောဘအားမျဉ်းလစာ / နှုန်း $ 150 ချ FT ဖို့တွင်-ဆိုက်ကိုကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်စီးတီး, ပြည်နယ်စတူဒီယိုစီးတီး PT အယ်ဒီတာ, CA Duration: PT 03 / 26 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်ယောဘခေါင်းစဉ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted: Editor ကိုအမျိုးအစား: ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပေးဆောင် ယောဘသည်: ဟုတ်ကဲ့နှုန်း: $ 150 / နေ့3ရက် / အပတ်ကပြည်ထောင်စုမှာစတင်: အဘယ်သူမျှမတည်နေရာ: Los Angeles ကိုစတငျ: ASAP,3ရက်မှာစတင်ပါလိမ့်မယ် ...
သတင်းထုတ်လုပ်သူ / ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်သူ
သတင်းထုတ်လုပ်သူ / ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်သူကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်ကိုလံဘီယာ, 03 / 26 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်ပေးမ SC Duration: လစာ / နှုန်းထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘမီးခိုးရောင်တယ်လီအကြောင်းယောဘအကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ: Grey ကရုပ်မြင်သံကြားပေးခွငျးအားဖွငျ့ဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်းအကျိုးစီးပွားထောက်ခံပါသည် အရည်အသွေးမြင့်ရုပ်သံအသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အစေခံတစ်ဦးချင်းစီဈေးကွက်ထဲမှာခြွင်းချက်ဝန်ဆောင်မှု။ မီးခိုးရောင်ပိုင်ဆိုင်နှင့် / သို့မဟုတ်လည်ပတ်ရုပ်မြင်သံကြားဘူတာနှင့်ဦးဆောင် ...
ကူညီအနည်းငယ်အပိုလူတွေရှာဖွေနေယောဘအကြောင်း2/ 03 / 26 ဝက်ဘ်ဆိုက်လျှို့ဝှက်ဝေမျှမယ်အပေါ် posted ချုပ်ကိုင်နှင့် Electric ကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်စီးတီး, ပြည်နယ် Los Angeles မြို့,, CA Duration: 19 ရက်ပေါင်းလစာ / နှုန်းအတွေ့အကြုံ (မျှ / အနိမ့် paid / ကော်မရှင်သာ) ယောဘသည် ဂျီ & E ကိုဌာန၌တည်၏။ အဘယ်သူမျှမအတွေ့အကြုံကိုလိုအပ်ရုံကောင်းတစ်ဦးသဘောထားနှင့်ကူညီပေးဖို့ဆန္ဒရှိကြောင်း။ ဤရွေ့ကားမဟုတ်သော paid ရာထူးဖြစ်ကြသည်။ ...
ဟာသစာရေးဆရာ - တရုတ် Web ကိုစီးရီး
ဟာသစာရေးဆရာ - တရုတ် Web ကိုစီးရီးကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်စီးတီး, ပြည်နယ်က New York, NY Duration:3လ, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအချိန်လစာ / နှုန်း 03 / 26 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်ကိုယောဘကျနော်တို့တရုတ်-ဇာတိစာရေးဆရာများရှာဖွေနေတဲ့ယောဘသည်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမဆွေးနွေးကြစေရန် ရှန်ဟိုင်းမှာထုတ်လုပ်လျက်ရှိသောဟာသကို web စီးရီးသည်။ ဒါဟာအလားတူနှင့်အတူမှောင်မိုက်ဟာသဖြစ်ပါတယ် ...
5 ၏စာမျက်နှာ 81«ပထမဦးစွာ...«34567 » 102030...နောက်ဆုံး»